Open Data eThekwini
Buza iTheku umkhankaso Ukuthumela ukuqoqa imibuzo ukuthuthukisa iwebhusayithi lapho abantu eThekwini ungaya ukuthola izimpendulo evame ukubuzwa mayelana uhulumeni (nezinye) amasevisi e Durban.
Funda kabanzi mayelana #AskDurban neTheku Izimpendulo ngezansi
Buza iTheku umkhankaso ukuthumela ukuqoqa imibuzo
Buza iTheku umkhankaso ukuthumela ukuqoqa imibuzo Answers Durban, iwebhusayithi lapho abantu eThekwini ungaya ukuthola izimpendulo evame ukubuzwa emzini. Ngaphambi kokuthi uqalise “eThekwini Izimpendulo”, sidinga ukwazi ukuthi iziphi izinselele nivuna endaweni yakini ukuze “eThekwini Izimpendulo” ingakwazi ukunikela ngolwazi oluwusizo kuyo yonke izakhamuzi eThekwini. Uke othumele umbuzo noma isikhalazo ukuba iqembu laseThekwini kwiFacebook? Wake wazama ukubika lezo zinkinga ngqo eThekweni? Yayiyini website kahulumeni zokugcina ozame ukuyisebenzisa kodwa wathola into exakayo? Yini umsebenzi karhulumende ayisebenzi kahle emphakathini wakini? Let us know by sending us your questions below!
I-intanethi #AskDurban mkhankaso ngenyanga-eside isixuku-nokuhlonza isinyathelo ukuqoqa imibuzo izakhamizi nsuku zonke mayelana nezinsizakalo zikahulumeni. Imibuzo kungenziwa zithunyelwe webhusayithi mkhankaso noma nge @durban_answers twitter usebenzisa #AskDurban hashtag.
Izimpendulo eThekwini lidinga okuqukethwe in imali esifushane ukwakha database izimpendulo. Ngakho, ukuze senze lokho, sizokwenza ukusingatha umcimbi lapho abalobi, zitholakale zobuchwepheshe, noma abantu ngalutho ntambama ngoLwesihlanu ongeza abhale bese ukuphendula imibuzo eminengi ngendlela abangakghona ngayo. Lokho okuqukethwe kuyoba izimpendulo izakhamuzi kwansuku angasebenzisa ukuzulazula zikahulumeni - lakhiwa izakhamuzi for izakhamuzi.
Abanye kungenzeka ucabanga - lokho kuyinto phrojekthi Izimpendulo? Izimpendulo amaphrojekthi Uyi platform zomphakathi evumela izakhamuzi uthayiphe umbuzo mayelana namasevisi idolobha ukuze uthole impendulo esheshayo futhi elula, ikakhulukazi ngesimo isinyathelo-by-step "kanjani-ukuze" format. Isebenze ngendlela efanayo ku-Google, abasebenzisi ufake umbuzo noma elisemqoka ibe kubha yokusesha bese uthole impendulo elula, futhi esheshayo noma step-by-step guide.
Isakhamuzi iqhaza kule nqubo kuba ingxenye kubalulekile ngenxa yezizathu ezimbili. Okokuqala, sinciké Durbanites ukuze usitshele ukuthi nezinhlungu zabo futhi asize ukukhiqiza impendulo elula zaleyo mibuzo. Okwesibili, futhi cishe ebaluleke kakhulu, sifuna izakhamuzi ukuthatha ubunikazi eThekwini Izimpendulo futhi ukwakha inethiwekhi izakhamizi ezibamba abathanda futhi abanothando benza umsebenzi umuzi wabo olungcono ngabo. Thina ngempela ukwazi ukwenza lokhu ngaphandle kwakho.
Ukulungele uhambise umbuzo wakho? Chofoza lapha!
Usafuna ukwazi okwengeziwe?
Funda yikho kanye ebesilokhu bebhala Buza iTheku:
Open Data iTheku zomphakathi ubuchwepheshe lab nokobana futhi ngabammeli idatha evulekile, uhulumeni evulekile, nobuchwepheshe nezomphakathi.